China 2021China fandroana trano fandroana vita amin'ny rano vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny zaridaina vita amin'ny zaridaina sy mpamatsy | Belle
Fandroana freestanding akrilika
Fandroana aprono / kovetabe fandroana
Fandroana fandroana surf / fandroana Jacuzzi
Fanakatonana / efitrano fandroana
Fandroana fandroana / fandroana
2021China fandroana trano fandroana vita tavoahangy vita amin'ny tavoahangy vita amin'ny tavoahangy vita amin'ny akrôna misy zipo
amidy mafana qua ...
whir avo lenta ...
fivarotana mafana glo ...
Sehatra fotsy madio ...
Habetsahana (sombin-javatra) 1 - 10000 > 10000
Est. Fotoana (andro) 30 Hifampiraharahana
Logo namboarina (Min. Order: 50 Pieces)
Fonosana namboarina (Min. Order: 50 far)
Fanamboarana sary (Min. Order: 50 Pieces)
Ny vidiny farany mahantra indrindra any Chine
FANAJANA BATHTUB ACRYLIC
Warranty: 3 taona, 3 Taona Fitaovam-piadiana: tsy misy
Faucet: Tsy tafiditra Fitaovana fandroana: Drainer
Serivisy aorian'ny fivarotana: Fanohanana ara-teknika an-tserasera, Fitaovana maimaimpoana maimaimpoana Style: Akanjo misy lafiny roa (zipo ankavia)
Fahafahana vahaolana amin'ny tetikasa: famolavolana sary, famolavolana modely 3D, vahaolana tanteraka ho an'ny tetik'asa, Fanamafisana ny sokajy Cross, hafa Fampiharana: Hotely, Fandroana anaty trano
Style Design: ANKEHITRINY Toerana niandohana: Anhui, Sina
Anaran'ny marika: Belle Model Model: BS0012358
Fitaovana: Acrylic, akrilika Function: hahavonto
Fametrahana karazana: Mitete-in Drain Toerana: ahitsy
Loko: fotsy Anaran'ny vokatra: acrylic bahtutb
Habe: 1800 * 800 * 400mm Fomba fanaraha-maso: Fanaraha-maso ny tanana
Endrika: Retangle Anarana: Fehin-kibo iray sy fantsona iray tsara indrindra fandroana akrilika tsara indrindra
20000 Piece / Pieces isam-bolana fehikibo iray ary làlana iray tsara fandroana akrilika tsotra1000 Set / Sets isam-bolana
Sarimihetsika fiarovana ny tetikady 1.
2. zoro fiarovana
Baoritra misy standed
4. palety raha ilaina
Ny vokatra fitehirizana ny hafanana dia tsara. Na dia amin'ny ririnina mangatsiaka aza, ny hoditra dia tsy hahatsapa "mangatsiaka" rehefa mifandray amin'ny vatana amin'ny fandroana akrilika.
Kornerin'ny kovetabe fandroana
Ny koveta fandroana akrilika dia manana toetra mampiavaka ny fanasitranana tena. Raha misy ratra eo ambonin'ny kovetabe fandroana akrilika, ny koveta fandroana dia hanana fatra fanasitranana samirery. Ankoatr'izay, ny tampon'ny fandroana akrilika dia malama, fotsy ary mora diovina.
Pop Up koveta fandroana
Aifol nanamboatra fandroana fandroana. Voadio Chrome anti-harafesina sy anti-harafesina, tsara tarehy kokoa ary
Raha mila tsindrio hafa ianao, kitiho eto.
Fanodinana ny vokatra
Maninona no mifidy US (Customer Show)
Safidy bebe kokoa
Belle dia manana 300+bobongolo. Misy iray ilainao foana
Safidy kovetabe fandroana maro:
Fandroana fandroana; fandroana fanorana; fandroana fandroana; koveta fandroana clawfoot.
Tombony amin'ny famokarana sy tombony amin'ny fanaterana
Ny fivadihan'ny 2020: $ 9 tapitrisa
Output isan'andro: koveta 500cm / andro
Fotoana fandefasana: 15-25 andro
Azo itokisana sy matihanina
Ny mpanjifanay dia manerana an'izao tontolo izao ary Belle dia efa ela ny fiaraha-miasa trem amin'ny tontolo maro
marika malaza toy ny saint-gobain, vondrona adeo, fantsom-pandresena Victoria, Kohler, Reece ...
Noho izany, Belle dia manana traikefa manankarena manampy anao hamaha olana.
Rariny sy mpanjifa
Belle dia nandray anjara tamin'ny varotra fanadiovana isan-karazany tao an-trano sy tany ivelany. Tamin'ny taona 2019, Belle dia nandray anjara tamin'ny ISH (Germen), Cantonfair (Guangzhou, China), KBC (Shanghai, China). Raha tsy mety aminao ny mitsidika an'i Sina, afaka mifampiresaka amin'ny foara izahay.
Belle founed in 2010, dia orinasa mitarika indostrian'ny fanadiovana iray manontolo. Manarona Belle20.000 metatra toradroa. Manana orinasam-bola 2.
Manodidina ny 200 ny mpiasa, ao anatin'izany ny maherin'ny 10% ny injeniera sy teknisiana zokiolona ary olona 5 ao amin'ny departemanta R&D. Ny fivadihan'ny taona 2020 dia nahatratra 9 tapitrisa dolara.
F1. Inona ny teny fonosanao?
A: Amin'ny ankapobeny dia fonosinay miaro amin'ny zoro ny sarimihetsika miaro ny entanay. ary baoritra volontany. Raha manana patanty voasoratra ara-dalàna ianao dia afaka manangona entana ao anaty boaty misy marika izahay aorian'ny nahazoana ireo taratasy fanomezandàlana anao.
F2. Inona ny fe-potoana fandoavanao vola?
A: T / T 30% toy ny petra-bola, ary 70% alohan'ny fandefasana.L / C OA koa dia raisina an-tanan-droa. Hasehonay anao ny sarin'ny vokatra sy fonosana alohan'ny handoavanao ny mizana.
F3. Inona ny fe-potoana alefanao?
F4. Ahoana ny amin'ny ora fandefasana anao?
A: Amin'ny ankapobeny dia maharitra 25 ka hatramin'ny 30 andro aorian'ny fahazoana ny vola aloanao mialoha. Ny fotoana fandefasana manokana dia miankina
amin'ny entana sy ny haben'ny baikonao.
F5. Afaka mamokatra arakaraka ny santionany ve ianao?
A: Eny, afaka mamokatra amin'ny alàlan'ny santionanao na sary teknisianina izahay. Azontsika atao ny manamboatra ny bobongolo sy ny lamina.
F6. Inona ny politikanao ohatra?
A: Afaka manome ny santionany izahay raha manana ampahany vonona amin'ny tahiry, fa ny mpanjifa kosa dia tsy maintsy mandoa ny vidin'ny mpampita hafatra.
F7. Mitsapa ny entanao rehetra alohan'ny fanaterana ve ianao?
A: Eny, manana fitsapana 100% izahay alohan'ny fanaterana
F8: Ahoana no anaovanao ny orinasantsika maharitra sy fifandraisana tsara?
A: 1. Izahay mitazona ny kalitao tsara sy ny vidin'ny fifaninanana hahazoana antoka fa hahazo tombony amin'ny mpanjifanay;
2. Manaja ny mpanjifa rehetra amin'ny maha-namantsika izahay ary manao raharaham-barotra amin-kitsimpo sy manao sakaiza amin'izy ireo,
Maninona no mividy fandroana zipo
Ny fitanisana ny koveta fandroana dia mampatsiahy ahy firenena iray, dia i Japon. Rehefa niverina avy nianatra tany Japon ireo namako dia niresaka tamiko matetika momba ny maha-zava-dehibe ny fandroana ao Japon izy ireo. Ny Japoney dia tia mandro be. Ny fianakaviana tsotra dia manana fahazarana mandro isan'andro. Noho izany, na kely toy inona aza ny fandroana fianankaviana ao Japana dia ilaina ny mametraka koveta fandroana.
Ho anay, ny fandroana sy ny fandroana dia fitaovana fandroana mahazatra amin'ny fianakaviana maoderina. Ny efitrano fandroana dia mety ampiasaina, fa ny fampiononana sy ny fampiasana ny fandroana fandroana dia tena tsara. Ankehitriny dia mihamaro ny fianakaviana misafidy ny hametraka kovetabe fandroana. Ny koveta fandroana dia tsy fandroana fotsiny, fa karazana toe-po, fa karazana mahafinaritra ihany koa. Ny miasa ivelan'ny tontolo andro, ny mody amin'ny alina, ny fandroana mafana mampahazo aina, ny miala sasatra ary ny fanasana ny havizanan'ny andro no mahasalama ny olona. Ho an'ny fianakaviana manan-janaka indrindra, dia ilaina amin'ny fiainana ny kovetabe fandroana.
Akrilika: ity fitaovana ity dia mora ny mamorona, miadana ny fanaparitahana ny hafanana, ny fahombiazan'ny insulation tsara, ny fikasihana mafana, ny fanadiovana, ny fametrahana azy mora vidy ary ny malaza.
1 、 Voalohany, refeso ny halavan'ny rindrina ary fantaro ny halavany sy ny haavon'ny rindrina eo afovoany. Ny halavany sy ny haavony azo ampiasaina dia azo alaina amin'ny fandrefesana ny halavany sy ny haavon'ny rindrina ary esorina ny fandroahana ny zipo fandroana.
2 、 Avy eo, raha mamaritra ny haavon'ny fandroana ny fandroana fandroana dia tokony hieritreritra ny fanaka ao amin'ny trano fidiovana hafa koa isika, ary hampiasa sary hosodoko handanjalanjana ny andaniny roa mba hahatratrarana ny vokany ankapobeny.
3 、 Avy eo, safidio ny habe mety. Rehefa misafidy zipo fandroana misy habe sahaza azy dia ny habeny manokana amin'ny faritra ankapobeny amin'ny fandroana no jerena voalohany indrindra. Mandritra izany fotoana izany dia ahantona na apetraka eo am-baravaran'ny trano fidiovana araka ny haben'ny fandroana, ny isan'ny olona ary ny safidiny manokana.
4 、 Avy eo, amin'ny ankapobeny, raha ny elanelana misy eo am-baravaran'ny trano fidiovana sy ny rindrina dia tsy lehibe dia azo dinihina ny fomba fanantonana voalohany. Raha misy trano fandroana ho an'ny ankizy, ny fomba fanantonana dia ampirisihina hiantohana ny fiarovana azy.
5 、 Avy eo, ny fitaovana fanampiana dia alamina isaky ny sokajy. Ny famafana sy ny fomba fanangonana ny zipo fandroana dia tokony handamina tsara ny toerana misy ny fitaovana fampitaovana fanampiana hafa, toy ny DVD player, cable TV penerima, video converter, sns. Noho izany dia asaina apetraka eo akaikin'ny fitaovana araka izay tratra mba hanamorana ny tariby. Ny toerana misy ankizy dia tsy tokony hamela ny ankizy hikasika ireo fitaovana, noho izany dia azo ampiasaina varavarana fandroana misy baffles.
6 、 Farany, mila manana fitaovana madinidinika ianao, toy ny biriky sy awl, mba hahafahanao mamongotra sy manangona ny zaridaina fandroana. Raha zatra mandry ao amin'ny kovetabe fandroana ianao handroana dia tsy dia zava-dehibe loatra ny fanesorana ny zipo fandroana. Na izany aza, raha mpanjifa lava ianao, ny fanesorana ny zipo fandroana dia mety ahazoanao aina kokoa ampiasaina.
Teo aloha: Fandroana fandroana fandroana acrylic square fotsy madio, mety amin'ny hotely ambony
Manaraka: 2021 fivarotana mafana amin'ny toeram-pisakafoanana any ivelany Whirlpool lomano lomano dobo fandroana Spa
Fandroana fandroana 6 'miaraka amin'ny aprona
Mifandraisa aminay:0086 18098505440